Flight Simulators ho an'ny Linux
Linux Hevitra fototra
Raha te hisidina foana ianao nefa tsy voavaly amin'ny fandaniana sy ny loza mety hitrangan'ny fiaramanidina tena izy, dia azonao atao ny manandrana iray amin'ireo simulateur mpanafika ho an'ny Linux. Noho ny ordinatera ambony sy ny ordinatera boaty tsara tarehy sy ny horonan-tsarimihetsika lehibe avo lenta, dia afaka mahatsapa ny hafaliana amin'ny fiaramanidina ny fiaramanidina manokana avy amin'ny fiarovana ny tokantrano na ny biraonao. Ny mpanafatra ny sidina dia mamela anao hisafidy amin'ny fiaramanidina maro samihafa, avy amin'ny turboprop kely mankany amin'ny seranam-piaramanidina lehibe ary manidina mankany amin'ny toerana maro eto an-tany, ary ny seranam-piaramanidina maro any amin'ny tanàna samihafa.
Ny X-Plane dia iray amin'ireo fitaovana fampiasa amin'ny sidina simulator faran'izay haingam-pandeha ho an'ny solosaina manokana ary ahitana ny sehatr'ireo planeta Earth sy Mars. Ny X-Plane dia mamorona modely amin'ny sidina amin'ny tena marina amin'ny alàlan'ny fifehezana ireo hery miasa any amin'ny faritra tsirairay amin'ny fiaramanidina. Tafiditra ao anatin'izany ny tebiteby, ny vokatra ateraky ny tany sy ny simulation. Na ny toetr'andro aza dia simba amin'ny fampiasana angon-drakitra amin'ny toetr'andro izay nakarina tamin'ny fotoana voatondro.
Ny tanimboly dia modely araky ny angon-drakitra avy amin'ny Sampan-tsarimihetsika Shuttle Radar, ary ny tontolo iainana dia ankafiziny amin'ny fampiasana simia fifamoivoizana. Ny X-Plane 9 dia ahitana seranam-piaramanidina maherin'ny 25,000. Ny fampivoarana ny fahombiazana dia nampihena ny fampiasana fahatsiarovan-tena sy ny fihenan'ny haavon'ny fitondrana. Nampidirina modely avy amin'ny fiaramanidina hafa, ary nanatsara ny fitaovana hananganana fiaramanidina manokana.
Ny rindrambaiko dia misy eo amin'ny $ 40 ary tonga amin'ny DVD avo valo, izay ahitana ny angon-drakitra ilaina.
Ny loharanom-baovao malalaka sy malalaka amin'ny X-Plane dia FlightGear, izay efa niorina nandritra ny folo taona ary efa lava lavitra. Tena simba tanteraka ny sidina amin'ny fampiasana azy amin'ny ordinatera tsotra. Noforonina tao Linux izy io, ary misy ihany koa ny sehatra mahazatra hafa. Ny habetsaky ny fiaramanidina sy ny tany, ary ireo similitao marina momba ny fitondran'ny fiaramanidina sy ny tontolo iainana, anisan'izany ny masoandro, ny volana ary ny tany, dia mahafinaritra sy mampianatra.
Ny fandrindrana simika nataon'i FlightGear sy ny fampisehoana an-tsary 3D dia avo lenta loatra ka ampiasaina amin'ny tetikasa isan-karazany, toy ny rafitra fanadihadiana ny olana eo amin'ny fiaramanidina, na fitaovana fanehoana an-tsary ho an'ireo fiara tsy matihanina. Ny simulation iray avy amin'ny FlightGear dia nampiasaina ho anisan'ny fampisehoana fahitalavitra mba hanomezana sary an-tsarimihetsika momba ny fianjeran'ny fiaramanidina.
JSBSim dia mamolavola modely fandehan'ny fiaramanidina (FDM), izay ampiasaina hamotika ireo hery ara-batana izay mampandeha fiaramanidina, balafomanga ary fitaovana hafa amin'ny sidina. Ny tafika toy izany dia misy rafitra fanaraha-maso izay ampiharina amin'ny zavatra, ary koa ny tranga voajanahary. Ny rindrambaiko dia ahafahanao manamboatra ny rafitra fiarovan'ny sidina, ny aerodynamic, ny fiaramanidina, ary ny rafitra fitsangatsanganana amin'ny alalan'ny fampiasana rakitra fikirakirana XML. Afaka manimba ny vokatry ny fihodinan'ny tany izy, toy ny coriolis sy ny hery misintona. Ny data dia afaka mandefa ny efijery, ny rakitra, na ny saka.
OpenEaagles dia rafitra simulation amin'ny ankapobeny izay azo ampifandraisina amin'ny rafitra fanodinan-tsambikin'ny sidina toy ny JSBSim mba hamolavolana ny simulator amin'ny sidina.
Raha te hampihatra sidina fitaovam-pitsikilovana ianao, dia mety ho izay tadiavinao ny IFT. Ny IFT dia midika hoe "Instrument Flight Trainer" ary manasongadina toeram-pamokarana VOR sy NDB sy fanehoana. Ny VOR sy ny NDB dia fitaovana fitaterana baoritra mifototra amin'ny tany, izay ahitan'ny VOR fehintseranana ny fihazakazakazakazakazaka be dia be, ary ny NDB dia fohy ho an'ny Radio Beacon Nondirectional. Ho fampahalalana bebe kokoa dia jereo eto. Download here.
Inona ny Linux Tarballs ary Ahoana no azonao ampiasaina?
Inona no mety ho vulnerability andro iray ary inona no azonao atao mba hijanonana ho azo antoka
Antony 12 Nahoana no Linux no tsara kokoa noho ny Windows 10?
Tokony hanitsy ny alahatry ny domy ao Linux ve ianao?
Torolalana ho an'ny mpitsidika ho an'ny GNOME Boxes
Ny tari-dalana feno amin'ny Ubuntu Unity Dash
Ny mpilalao Audio Quod Libet
Inona ny / etc / services amin'ny Linux / Unix?
Fallout 3 Cheats amin'ny PC - Boky sy fitaovana
Fampisehoana ny Mana Review - Fahatelo ny Charm
Ahoana ny fampiasana ny SMTP Settings?
Samsung H3272: Dingana iray amin'ny làlana marina
Ahoana no hanamboarana sy hanohanana ny tranonkala tsara indrindra?
Ahoana no fomba ampiasana Google ahitanao finday?
Manitsy ny fifandraisana amin'ny BlackBerry miaraka amin'ny fampiharana Desktop
Ahoana no hamafana ireo sary voafafa amin'ny iPhone
Atsaharo ny safidy
Inona ny fitsipika 5-4-3-2-1 (amin'ny ordinatera amin'ny ordinatera)?
Ahoana ny famadihana Word Doc amin'ny HTML
Ahoana ny fahazoana midadasika Free Live Hotmail amin'ny alàlan'ny POP
25 amin'ireo zavatra mampihetsi-po hita any amin'ny Google Street View
Ahoana ny fampifandraisana ny iPhone amin'ny Wi-Fi
Mitondra ny fitaovanao manokana: fiantraikany amin'ny fanabeazana
Disc Savvy v10.8.16
WiseWear Bracelets dia miara-miasa amin'ny fiarovana
Ahoana ny fijerena ny valin'ny Uber anao
Manazava ny Minecraft Mobs: Villagers